Ukuphupha ithiki Discover ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Amakhalane angamalungu eqela lezinambuzane, ngakumbi iiarachnids, kwaye anokufumaneka kuzo zonke el mundo. Izirhubuluzi ezincinci zihlasela abantu okanye izilwanyana ukuze zincamathele kulusu lwazo zize zifunxe igazi emzimbeni wazo. Ukuba ufumene uphawu lokukorekisha kuwe, kuya kufuneka ulususe ngononophelo kulusu usebenzisa indlela ethile yokujija entlokweni ene-tweezers. Ukuba intloko iyaxinga, kukho umngcipheko wosulelo kwaye, kwimeko embi, kukho iingxaki. Emva koko ugqirha kufuneka adibane ngokukhawuleza.
Igama elithi "uphawu" ngamanye amaxesha ngamanye amaxesha lisetyenziswa ngokuthuka. Ke, iparasite okanye umngqibi ubizwa ngokuba yingcongconi, Oko kukuthi, umntu ofuna ukufumana into komnye umntu ngaphandle kwento.
Nabani na obona isilwanyana ephupheni kufuneka ngokubanzi alumke. Amakhalane anentsingiselo yesilumkiso ephupheni:
1 Uphawu lwephupha «uphawu» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «tic» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «uphawu» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «uphawu» - ukutolikwa ngokubanzi
Amakhalane ancamathele kwithagethi yawo kwaye afunxe igazi lamaxhoba. Ukuba iphupha libona uphawu lokukhupha ephupheni, elinamathele ngenkani kulusu lwakho kwaye limunce igazi lakho, oko kudla ngokufuzisela ubunzima ngothando, emsebenzini okanye kusapho. Ingxaki ebomini ethe yanamathela kuwe kwaye ifuna ukuluma kunye nokufunxa amandla emzimbeni wakho. Kungoko, uphawu lokukhupha ephupheni lubizwa okokuqala isilumkiso Iyaqondakala.
Ukuba umphuphi ubona umkhaza ephupheni, erhubuluza kulusu lwakhe njenge-parasite, umntu kufuneka ahlole imeko yakhe yengqondo nengokwasemzimbeni. impilo imbeko, cinga kakuhle. Banokuziva boyisiwe yimicimbi eyahlukeneyo.
Ukuba amakhalane azifihla phantsi kolusu njengomhlonyane anyamalale, ingxaki kwilizwe lokuvuka lifuna amandla amaninzi kumphuphi. Uziva ngathi "uyanya" kwaye ufuna ngokungxamisekileyo isigaba sokubuyisela ukuze uphefumle.
Amakhalane amakhulu ephupheni athatyathwa njengesilumkiso ukuba sibekho Ngaba y Amathumbu Qaphela. Kwaye ukuba ukuphupha kuyazibona ephupheni, ukuba ityumza njani umntu oza igazi, ukuze ikwazi Iintshaba tolika, uphazamise kwaye ube nesicwangciso. Apha umntu kufuneka alumkele abantu abanobuqhophololo kufutshane.
Ukuluma ngokuthe ngqo kwintonga ephupheni kuthetha ukuba kufuneka ugcine amehlo akho evukile ukuze ungaxhatshazi. Mhlawumbi umntu uphila njenge-parasite ngeendleko zakho.
Ezinye iimeko zokuphupha ngamakhalane:
Phawula kakhulu: utyelelo lokugula luza kungekudala
Ikhalane alinakususwa: iingxaki ezinzima ukuzisombulula
Ikhalane lisuswe ziintlungu: into ikhutshwe ebomini, inkqubo ibibuhlungu ngokwasemphefumlweni
Phawula ukuluma ngobofu: uloyiko, umona kunye nokuthandabuza kuyabonakala.
Uphawu lwephupha «tic» - ukutolikwa kwengqondo
Ikhalane ephupheni uloyiko y ukungenisa yokulala ebonakalayo. Iingxaki kwezothando, emsebenzini okanye kusapho zixinekile ngokuqina kwethiki. Ebomini uziva uhluthwe amandla kwaye ukwinqanaba lemfuno egqithisileyo.
Ukuzama ukushukumisa umkhaza kufana nokuzama ukusombulula ubunzima obunzima kwaye uzise amandla Ibhalansi gcina.
Uphawu lwephupha «uphawu» - ukutolika kokomoya
Nokuba uphawu lokutolika lutolikwa gwenxa ephupheni, likhanyiselwa kwicala elilungileyo kwiinkcubeko ezithile.
Isilwanyana esikhathalayo silinda ixesha elide nomonde ukuba ixhoba linamathele. Oku kubizwa ngokuba kubhengeziwe ngqalelo y UWillenkraft Itolikiwe